"> भारतीय डनका नेपाली ‘बिजनेश पार्टर’ नेता ! – www.agnijwala.com
भारतीय डनका नेपाली ‘बिजनेश पार्टर’ नेता !
काठमाडौं । भारतीय डन दाउद इव्राहिमले नेपालमा आफ्नो ब्यापारिक अखडा जमाएको भारतीय पत्रिकाहरु प्रभात खवर र दैनिक जागरणले सामाचार बनाएका छन् ।बताएका छन् । केही दिन पहिले दाउदका विश्वास पात्र एजाज यूसुफ लकड़ावाला भारतको पटनाबाट पक्राउ परेका थिए ।
भारतीय प्रहरीको हिरासतमा रहेका एजाजले दाउदको ब्यापारिक अखडा नेपालमा भएको बयान दिएका छन् । उक्त पत्रिकाका अनुसार दाउदले नेपालमा इन्फास्टक्चर, कन्सट्रक्शन, होटल जस्ता ब्यवसाय सञ्चालन गरेको छन् । दाउदलाई नेपालका केही प्रभावशाली नेताहरुले सहयोग गरेको पनि बताइएको छ । तर भारतीय पत्रिकाहरुले भने नेपाली नेताहरुको नाम खुलासा गरेका छैनन् ।
एजाजले प्रहरीलाई दिइएको बयानका आधारमा भारतीय पत्रिकाहरुले समाचार बनाएका छन् । प्रहरीसँगको बयानमा एजाजले नेपाली नेता र ब्यूरोक्रयाट्ससँग मिलेर दाउदले ठुला कम्पनीहरु सञ्चालन गरेको बताएका छन् । तर कम्पनीका नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
पहिलेदेखि नै नेपाली केही नेताको नाम दाउदसँग जोडिने गरेको छ । तरपनि उनीहरु दाउदका ब्यापारिक पार्टनर भएको तथ्य कतैबाट खुल्न सकेको थिएन । एजाज पक्राउ परेपछि भारतीय प्रहरीसँग नेपाली नेताहरुको नाम पनि खुलाएको बताइएको छ । तर भारतीय प्रहरीले नेपाली नेताहरुको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
एजाजले दाउदका सवै कम्पनीहरु नेपालमा बसेर सञ्चालन गर्दै आएको भारतीय प्रहरीको दावी छ । भारतबाट लागु औषध, नक्कली नोटको कारोवार पनि दाउले गर्ने गरेको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् । तर नेपालको प्रहरीले भने यस बिषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।